Ekoatera: Ny Fanalànjaza Anivon’ny Adihevitra Mikasika Ny Lalàmpanorenana Vaovao · Global Voices teny Malagasy
Ekoatera: Ny Fanalànjaza Anivon'ny Adihevitra Mikasika Ny Lalàmpanorenana Vaovao
Voadika ny 06 Jona 2018 2:34 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Français, Español, 繁體中文, 简体中文, srpski, English
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Septambra 2008)
Volana iray eo ho eo tsy hahatongavan‘ny fitsapankevitra momba ny lalàmpanorenana ao Ekoatora [amin'ny fiteny anglisy], mihamafy ny fampielezankevitra mikasika ny fifidianana, indrindra fa tety amin'ny aterineto. Ireo “pelucones” (anaram-petaka fanome an'ireo mpanohitra), sahala amin'ny an'ireo mpiandany, mahita hevitra sy antony hatrany mba hanohanana na hanoherana ilay volavolan-dalàmpanorenana. Mitodika any amin'ny fanohanana na fanoherana foana ny fironana, indrindra any amin'ireo anjerimanontolo.
Mikatroka mba hahazo mpankasitraka eny anivon'ireo anjerimanontolo eo an-toerana ny Alianza Pais (antoko politika an'ny Filoham-pirenena Correa) manantena ny hampangiana ny hatezeran'ireo mpianatra. Naneho ny fanoherany an'ilay Lalàmpanorenana vaovao ny vondrona mpianatra avy ao amin'ny Ajerimanontolo Katolika ao Guayaquit, tao anaty lahatsary an-kira.
“Yo también digo no” (Izaho koa manao hoe tsia”) izay no lohatenin'ny lahatsoratra iray nosoratan'i La Alharaca [amin'ny fiteny espaniola] izay manondro io lahatsary an-kira io, izay ny hira dia mitsikera an'ireo “pelucones” sady manesoeso an'ireo fanambaràna avy amin'ny prezidansy natokana mba hampanginana an'ireo mpanao fihetsiketsehana ao amin'ny Anjerimanontolo Katolika ao Santiago de Guayaqui (Santiago dia anarana iray mampirehareha ny mponina any Guayaqui ary anarana niaingan'ny faritanin'i Guayas).
Mifidy ny “Tsia” ny anjerimanontolo Katolika”- Hira: “Te-ho pelucon an'ny faritra aho”
Ny teboka tena mampiady hevitra amin'ilay Lalàmpanorenana vaovao anefa dia ny fanalànjaza sy ny zon'ireo vehivavy ekoatoriana hisafidy. Miditra amin'ny fanaovana fampitahàna ny ampahany natokana ho an'ny Fianakaviana ao anatin'ireo lalàmpanorenana ekoatoriana isankarazany i Don Javier [amin'ny fiteny espaniola], anisan'izany ny tany anatin'ireo fanavaozana rehetra, toy ireo tamin'ny taona 1979 sy 1998. Tsindriany tsara ny antony mahatonga azy hifidy ENY amin'ny fitsapankevibahoaka ny 28 septambra.
Araka izay hitako hatramin'ny taona 1979, tsy nisy nivazavaza tamin'ny filazàna fa niandany tamin'ny fanalànjaza ny Lalàmpanorenana na nanome alalana ny fanambadian'ireo mitovy fananahana. Mbola tsy naheno an'ireo pretra mitaingina Mercedes-Benz ireo mihitsy aho sy ireo mpihazona ny trosa ivelany nilaza hoe arovan'ny Lalàmpanorenana ny fanalànjaza … Fidiako ny ENY ary ENY an'arivony.
i Kevinhurl mitatitra [amin'ny fiteny espaniola] ny fifanakalozan-kevitra teo amin'ny aterineto niarahany tamin'ireo namany mpiandany amin'ny TSIA amin'ny fifidianana ho avy. Asongadiny ireo hetahetan'i Antonio Arregui Yarza (Filohan'ny Kaoferansy episkopaly ekoatoriana) ary amafisiny fa araka ny heviny, ny Lalàmpanorenana natolotra ho amin'ny Fitsapankevibahoaka dia tsy mametraka mihitsy ny zon'ny vehivavy ho amin'ny fanalànjaza:
Mijanona hatreo amin'izay fiantombohan'ny fahaveloman'ny zaza ny zon'ny reny hanala zaza: vantany vao notorontoronina. Satria ny andininy faha-46 dia mametraka mazava tsara fa ny eken'ny Fanjakana ary iantohany ny aina, ao anatin'izay ny fitandroana sy ny fiarovana, raha vao torontoronina fotsiny. Tsy misy mihitsy ao nilaza fa ny fanalànjaza dia zo, na msy zo iray ho amin'ny fanalànjaza.
Ao amin'ny firenena mpivavaka toa an'i Ekoatora, mitoetra ho adi-hevitra be ity lohahevitra ity hatramin'ny andron'ny fitsapankevibahoaka.
Sarikely an'i Marcio Ramalho